China Pearlescent mica powder fekitari uye bhizimisi Huajing
Huajing pearlecent mica upfu hwakagadzirwa neakasarudzwa synthetic mica wafers ayo akasiyana neakajairwa fluorophlogopite. Nekuti iyi nyowani yekugadzira mica nekushandisa Huajing yakasarudzika fomula uye zvigadzirwa zvekugadzira kugadzira.
Pearl Giredhi mica upfu
Chinhu Zvemukati zvirevo ruvara kuchena (Lab) hukuru saizi D90 (μm) hukuru saizi D50 (μm) hukuru saizi D10 (μm) Aplication
-15 -15μm chena 98 12 ～ 15 5, 7 2, 4 Siver akateedzana
5 ～ 25 5-25μm chena 98 22 ～ 25 10 ～ 13 5, 7 Sirivheri dzakateedzana
10 ～ 40 10-40μm chena 98 40 ～ 42 21 ～ 24 10 ～ 12 Sirivheri dzakateedzana Mashiripiti akateedzana Chameleon Series
10 ～ 60 10-60μm chena 98 49 ～ 52 25 ～ 28 12 ～ 14 Sirivheri dzakateedzana Mashiripiti akateedzana Chameleon Series
20-120 20-120μm chena 98 108 ～ 113 58 ～ 60 25 ～ 27 Sirivheri dzakateedzana
40 ～ 200 40-200μm chena 98 192 kusvika 203 107 ～ 110 49 ～ 52 Mashiripiti akateedzana Chameleon Series
60 kusvika 300 60-300μm chena 98 290 kusvika 302 160 kusvika 165 73 ～ 76 Mashiripiti akateedzana Chameleon Series
Kupisa kupisa ruvara Kuoma kwaMohs huwandu hwekudzivirira pamusoro resistivity (Ω) Nzvimbo yakanyunguduka kubaya simba Kuchena Kukotama
Huajing pearlecent mica upfu hwakagadzirwa neakasarudzwa ekugadzira mica mapundu ayo akasiyana neakajairwa fluorophlogopite. Nekuti iyi nyowani yekugadzira mica nekushandisa Huajing yakasarudzika fomula uye zvigadzirwa zvekugadzira kugadzira.
Iine hunhu hweyakareruka, yakajeka uye yakaderera fluorine. Wafers anozo pfuura neanotevera maitiro ekugadzira: kusarudzwa kwakasarudzika, kuchenesa cyclic, kunyatso kukuya, patent ultrasonic kupatsanura uye kudzikira kwetembiricha yakadzika .Izvi zviitwa zvakanyorovera mazhinji epamberi ekugadzirisa matekinoroji ekugadzira mica mumakore makumi matatu apfuura .Mamwe machira akagadzirwa neHuajing Saka saka yekupedzisira mica upfu ine zvakanakira yunifomu inoverengeka saizi, akakwana chitete chimiro uye nakisa yakakwirira dhayamita ukobvu. Huajing chakaita zvokugadzirwa mica upfu ndiyo yakanakisisa sarudzo kuti parera pigment sekristaro dzakatevedzana, magica akatevedzana uye chameleon dzakatevedzana.
Uye zvakare, Huajing synthetic mica inogadziriswa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi, saizi iri kubva pa10 ～ 900μm.
Ndeapi Matatu Matatu Makuru Epa Pearlescent Nguruve?
Maindasitiri pearlescent pigments, cosmetic pearlescent pigments, chikafu giredhi pearlescent pigments
Maindasitiri Pearlescent Nguruve
Iwo mavara akapfuma kwazvo, kusanganisira: classical pearlescent athari pigments, crystal pearlescent athari pigments, mavara aruminiyamu simbi mhedzisiro pigments, yakakwira performance pearlescent athari pigments, akawanda-mavara pearlescent maitiro pigments, emvura simbi pearlescent mhedzisiro pigments, ane mavara girazi pearlescent maitiro pigments, nezvimwe ., Inoshandiswa zvakanyanya mukupfeka, mapurasitiki, kudhinda, girazi uye zvigadzirwa.
Kuti tigone kuzadzisa zvido zvemusika, isu tinovavarira kuvandudza vatengi kuvandudza mukushanda kunogadzira pearlescent pigments kubatsira pearlescent pigment vanogadzira kugadzirisa matambudziko akasiyana siyana mukushandisa kwemusika. Senge: rubatsiro rwekukudziridza akasiyana siyana emamiriro ekunze-asingadi pearlescent mhedzisiro pigments, gadzirisa zvakakwana nharaunda yakaoma inotarisana nekupfeka mota uye epurasitiki epanze; isina guruva pearlescent mhedzisiro pigments inogadzirisa matambudziko eguruva kusvibiswa uye kupararira uye sedimentation ye pearlescent pigments mukudhinda inki; anti-yero pearlescent pigments inogadzirisa matambudziko e darkroom yero uye zuva kutsvuka mumapurasitiki Iyo yakakosha pigment yekurapa nzira inosangana nezvinodiwa zve yakakwira kuburitsa uye yakakwira pigment yekuwedzera mukugadzirwa kwepurasitiki ruvara masterbatch.
Tichishandisa zvizere hunyanzvi hwedu mukugadzirwa kweyakagadzirwa mica, isu tinoramba tichivhura nzvimbo nyowani dzekushandisa pigment. Semuenzaniso, yakakwira tembiricha yekushandisa zvigadzirwa zvinogadzira pigments inomira nemuedzo weakanyanya tembiricha mugirazi uye zvedongo maficha uchichengetedza iwo kudzikama kwemavara e pigments.
Zvizorwa Pearlescent Pigment
Nekuenderera mberi kwekuvandudza kweye cosmetics indasitiri, mhedzisiro uye kugadzirwa kwezvigadzirwa zvinounzwa nepearlescent pigments zviri kuramba zvichinyanya kukosha. Zvizorwa zvigadzirwa zvinogadzirwa nemapareracent pigments kana kusimba senge satin-senge kubwinya, kana kupenya kupenya semadhaimani. Kuti uwedzere kukwezva kwezvigadzirwa, zvigadzirwa zvekuchengetedza zvega zvakatangawo kushandisa pearlescent pigments kuvandudza kutaridzika kwezvigadzirwa kana kugadzira izvo zvinoitika zvigadzirwa.
Pearlescent pigments inoshandiswa mukugadzira zvigadzirwa zvinofanirwa kuiswa steril panguva yepamusoro tembiricha uye mutsetse wese wekugadzira unofanirwa kunge uri aseptic.
Iyo inoshandiswa kuburitsa yepamusoro sirivheri pearlescent uye yekunyepedzera ruvara kupindira mhedzisiro pearlescent, iyo isingakwanise chete kuwedzera kubwinya uye kupenya kushanda kune zvigadzirwa, asi zvakare nehunyanzvi kutora mwenje kuti ugadzire akasiyana pearlescent mavara nekushandisa yekukanganisa musimboti.
Inoshandiswa mukugadzira chameleon dzakateedzana, dzakapendwa kunge chameleon, kuburikidza akasiyana angles ekuona, unogona kuona shanduko yeruzivo ruvara.
Chikafu Giredhi Pearlescent Pigment
Izvo zvinonzi chikafu chinonaka chinogara chizere nemavara uye kuravira, uye yakasarudzika yekuona chiitiko inogara ichifambidzana nenguva yakanaka. Wedzera kune chako chigadzirwa
Pearl mhedzisiro pigments, kubva pasirivheri, goridhe uye kupindirana mhedzisiro, kune tsvuku uye shava matoni ekugadzira akajeka mavara uye hwoumbozha kubwinya, ngatitorei kupenya kunonaka pamwechete! Ongorora nyika yechikafu-giredhi mica pamwechete!
Pashure: Makambani Ekugadzira eMuscovite Mune Isina Chefu Uye Isina Turu Toy - Yakabikwa mica upfu - Huajing
Mica Yakavakirwa Pearlescent Pigment
Mica Pearlescent Nguruve